ओलीको यस्तो सदन हल्लाउने तयारि
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आइतबार सदन हल्लाउने तयारि रहेको खुल्न आएको छ जहाँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टेबुल गराएको अविश्वासको प्रस्ताव र छलफलमाथि जवाफ दिदैछन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री कसरी प्रस्तुत होलान् त ? सबैको जिज्ञासा छ । शुक्रबार साँझबाट सुरु भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बोलिसकेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओली र उनको नेतृत्वको सरकारको खुलेरै कडा आलोचना गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघीयता र गणतन्त्र विरोधी भएको आरोप लगाएपछि आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डले लगाएको आरोपको कडा खण्डन गर्ने तयारी गरिरहेको श्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने विषयमा आन्तारिक छलफल गरिरहेको र भाषणको तयारी समेत गरिरहेको बताइएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजावादीहरुसँग समेत साँठगाँठ रहेको आरोप लगाएपछि एमालेका केही नेताहरुले प्रधानमन्त्रीमाथि लागेको सो आरोपको खण्डन समेत गरेका थिए । प्रचण्डले सो आरोप लगाएपछि सोही अनुसारको जवाफ दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको बालुवाटार निकट श्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको कार्यकालमा भएका घटनाहरु र त्यसका सरकारले चालेका कदमहरुको समेत स्मरण गराउँदै समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।
भारतसँग माफी मागेको छु र घुँडामा भ्वाङ पर्नु ? – ओली
ओलीको राष्ट्रवाद लम्पसारवादमा परिणत भइसक्योः सभापति देउवा
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणअघि मोदी काठमाडौं आउने
पहिलो समाचारदेउवा र प्रचण्ड बिदेशी दलाल : विप्लव अर्को समाचारओली मानसिक सन्तुलन बिग्रिएका व्यक्ति हुन् : अमरेश